Times Square တွင်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ ခရီးသွားသတင်း
Times Square တွင်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ
Mariela Carril | | gastronomy, နယူးယော့
နယူးယောက်သို့ခရီးထွက်နေပါသလားသို့မဟုတ်၎င်းသည်သင်၏အိပ်မက်ဖြစ်ပြီးယင်းကိုသဘောပေါက်ရန်သင်သွားနေသလား။ ကောင်းတယ် နယူးယောက်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူကြိုက်များသောမြို့တော်ဖြစ်သည် အာရှတိုက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိပေမယ့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအဲဒီလိုမျိုးငါထင်တယ် အ အကောင်းဆုံး.
နယူးယောက်မြို့၏ညဥ့်နက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအရက်ဆိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်စားသောက်ဆိုင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အိပ်ရာမ ၀ င်ပါ။ အစာစားခြင်းသည်သင်သွားလေရာနေရာသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည် တိုင်းမ်စ်၏အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်အချို့ကိုစာရင်းပြုစုပါ ရင်ပြင်.
5 Ellen ရဲ့ Stardust Diner
9 ဒွန်အန်တိုနီယို, ပီဇာ
နယူးယောက်ရဲ့ထောင့်တစ်ခုပါ Midtown မန်ဟက်တန်ရှိလမ်းများအနှံ့အပြားလမ်းဆုံ: သတ္တမရိပ်သာလမ်းဘရော့ဒ်ဝေးရိပ်သာလမ်းတွေ့ဆုံရှိရာအချက်။ နယူးယောက်ရှိဤသေးငယ်သောsmallရိယာသည်လုပ်ကွက်အနည်းငယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးမည်သူမျှမလွတ်မြောက်နိုင်သောလမ်းလျှောက်ဖြစ်သည်။
Times Square ၎င်းကို ၁၉၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ဤနည်းအတိုင်းခေါ်ဆိုခဲ့သည်၎င်းကို Longacre Square ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သော်လည်းထင်ရှားသောသတင်းစာဖြစ်သည် အဆိုပါ New York Times ကို ထိုနှစ်တွင်သူသည် Times Building သို့အဆောက်အ ဦး အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တစ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကို ဦး တည်စေတယ်၊ ​​ဒီကနေ့ကို Times Square လို့ခေါ်တယ်
၎င်းသည်မြို့တွင်းရှိအကောင်းဆုံးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ ကြော့နှင့်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေ။ ဘားသည်အနီရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသြဂတ်စတင်းပွဲနှင့်ထူးခြားသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှထုံးကျောက်မီးဖိုများရှိသည်။
ဒီမီးဖိုချောင်၏တာဝန်ခံ အနုပညာပုံစံစားသောက်ဆိုင်Deco စားဖိုမှူး Geoffrey Zakarian ရှိပြီးမီနူးရှိပါတယ် သန့်စင်ထားသောဟင်းလျာများ foie gras, walnut crusted lamb, pecan butter profiteroles နှင့်ကောင်းမွန်သောကော့တေးများကဲ့သို့သောအားလုံးသည်သင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညများသို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းမနက်လည်၌ဖြစ်စေ၊
ဒါပေါ့, အဲဒါစျေးအကြီးဆုံးထဲကတစ်ခုပါ။ ၁၃၂ အနောက် ၄၄၊ စိန့်မှာတွေ့နိုင်တယ်။
သင်ရှာနေခဲ့လျှင် မြို့တော်ကိုကောင်းမွန်သောအမြင်ဖြင့်စားပါ လမ်းအဆင့်မှာဆိုရင်ဒါကကောင်းတဲ့နေရာပါ။ ဒါဟာတကယ်ကနေစားသောက်ဆိုင်တစ်ကွင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ် အီတလီအစားအစာ, ကီးဗားရှင်း။ Times Square တွင် Tuscan ပုံစံဖြင့်သုံးထပ်ပါဌာနခွဲရှိသည်။
အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုလက်ခံပြီးတနင်္ဂနွေမှကြာသပတေးနေ့မှနံနက် ၁၁ နာရီမှည ၁၁ နာရီအထိနှင့်သောကြာနေ့မှစနေနေ့ ၁၁ နာရီမှညသန်းခေါင်အထိဖွင့်သည်။ သင်အဲဒီမှာစားနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ယူသွားနိုင်သည် နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသင်ကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်တနင်္ဂနွေနေ့၌သွားလျှင်သင်လုပ်သင့်သည်
Olive ဥယျာဉ်သည်အီတလီအစားအစာများကိုကျွေးမွေးရန်ကြိုးပမ်းပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာရှိသည် Corean အစားအစာ။ BonChon သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ရာရှိသောကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
BonChon သည်စပ်သောကြက်သားအတောင်ပံများ၊ ပဲပုပ်ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကီမီချီနှင့်အခြားအရာအားလုံးတို့ကိုစားရန်နေရာဖြစ်သည်။ သို့သော် အိမ်၏အထူးအတိအကျကြက်သားဖြစ်ပါတယ်အရာအားလုံးကိုစမ်းသပ်ရန်အတောင်ပံများ၊ ခြေထောက်များ၊ ပေါင်များ၊
စျေးနှုန်းများ? ဥပမာအားဖြင့်တောင်ပံအနည်းငယ် (၁၀ ပိုင်းပိုင်း) အတွက်ဒေါ်လာ ၁၁.၉၅ ကုန်ကျသော်လည်း combo (အတောင်ခြောက်ခုနှင့်ပေါင် ၃ ပေါင်) သည် ၁၂.၉၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဟင်းပွဲများ၊ ၁၁.၉၅ အတွက် tteokbokki၊ ၇ ဒေါ်လာအတွက် takoyaki၊ ၁၅ ဒေါ်လာအတွက်ပြည်ကြီးငါးကြော်၊ ဒေါ်လာ ၈.၉၅ အတွက် Udon ဟင်းချိုသို့မဟုတ်ဆန် ၁ ဒသမ ၉၅ ဒေါ်လာအတွက်ကြော်ထားသောထမင်းတစ်ချောင်းရှိသည်။
သငျသညျ 207 W 38 စိန့်မှာ BonChon ဒါဟာ 11:30 a.m. ကနေ 10:30 p.m. မှတနင်္လာနေ့မှတဆင့်တနင်္လာနေ့ဖွင့်လှစ်, ကြာသပတေးနေ့, 11 pm မှာသောကြာနေ့, 12 pm မှာသောကြာနေ့, 11:10 pm မှာစနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေမှာ။
Ellen ရဲ့ Stardust Diner
နယူးယောက်ကိုမသွားဘဲသွားလို့မရဘူး ဂန္ထဝင် Diner ဒီမှာဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါပါ 50 themed စားသောက်ဆိုင် နှင့် နယူးယောက် menu ကောင်း: အသားညှပ်ပေါင်မုန့်, ​​ဟမ်ဘာဂါ, pastrami, ဖျော်ရည်။
ဒါပေမယ့်အစားအစာထက်ကျော်လွန် သူတို့ကအမိန့်တွေပေးနေချိန်မှာသူတို့ပြသတဲ့အတွက်စားပွဲထိုးတွေကိုကြည့်ရမယ် နှင့်သီချင်းများသည်အလွန်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ရော့ခ်သီချင်းများနှင့်လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များဖြစ်သောကြောင့်သင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုသင်မသိနိုင်ပါ။
သူတို့ဟာစင်ပေါ်မှာသီဆိုကြ၊ ထရပ်ပြီးဟင်းလျာများကိုဆက်လက်ဖြန့်ဝေနေကြသည်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုချင်လျှင် တစ်ချိန်တည်းမှာစားပြီးလျှင်အနည်းငယ်ပျော်ပါ ဒီ site က အကောင်းဆုံးအစားအစာမဟုတ်ပေမယ့်သေချာပါတယ် junk အစားအစာ ရိုးသားမဆိုး။
အစာ မက်စီကာနာ မျက်မှောက်၌တာကိုများနှင့်မြို့မှာအကောင်းဆုံးအချို့နှင့်အတူ။ Quesadillas နှင့် margaritas တို့သည်ဤမက္ကဆီကန်ဘစ်စထရိုတွင်အဖြူရောင်စားပွဲခုံများ၊ နံရံပေါ်ရှိစပိန် tile များနှင့်နှစ်ထပ်ခန်းပါသည့်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
သူ၌ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များအရမီနူးကိုထုတ်လွှင့်သောစူပါပြည့်စုံသောအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်မသွားခင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သူတို့ကနေ့လည်စာ၊ မနက်လည်စာ မနက် ၁၁း၃၀ မှည ၃း၃၀ တွင်အဆုံးသတ်သည်။
တကယ်လို့သင်ဟာတစ်ခုခုကိုတကယ်သဘောကျတယ်ဆိုလျှင်သင်ဟာ ၅ ဒေါ်လာကနေ ၃၅ ဒေါ်လာကြားရှိဝက်အူချောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လှော်ခတ်ထားတဲ့အရသာအမျိုးမျိုးကိုမ ၀ ယ်ခင်ဆိုင်မှာရပ်နားနိုင်ပါတယ်။
ကိုရီးယား၊ မက္ကဆီကန်နဲ့အမေရိကန်ဂန္ထဝင်အစားအစာတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြပေမယ့်ငါတို့မှာအနည်းငယ်ပျောက်နေတယ်၊ ​​ဒါကအလှည့်ပါ တရုတ်အစားအစာ။ အရသာရှိရန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုမှာကမ္ဘာတစ်လွှားရှိခြောက်ယောက်ရှိသည်ဖြစ်သောလန်ဒန်စားသောက်ဆိုင်၏ Hangkasan ဖြစ်သည်။
ဟင်းလျာကကန်တိုနီလူမျိုးဖြစ်သည် က ပထမဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်သည် Michelin အဆင့်အတန်းရှိသည်။ သိသာထင်ရှား, စျေးသိပ်မကြီးပေမယ့်သင်ကရှမ်ပိန်ငံပြာရည်နဲ့တရုတ်ပျားရည်တို့ပါဝင်တဲ့အကောင်းဆုံးလှော်ကော့ဒ်ကိုစားလိမ့်မယ်။ ထိုအခါအလှဆင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြော့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသေးငယ်တဲ့ဝေမျှတာဝန်ထမ်းဆောင်သောစျေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျသှားဆဲ, သင်မနက်လည်စာပျော်မွေ့ဖို့သွားနိုင်လျှင်, အဘို့အမေးရန်သေချာစေပါ မှိန် ငှေပေါငျး ဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုသိဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၃၁၁ အနောက် ၄၃ လမ်းမှာရှိတယ်
ငါတို့ဟာစျေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုကနေစျေးပေါတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသွားတယ် ဒါခေါ်ပြဇာတ်ရုံခရိုင်တွင်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် fries အများကြီးနှင့်အတူကြီးမားသောဘာဂါ သက်သတ်လွတ်စားသူများအတွက်ဒိန်ခဲနှင့်ကြက်သွန်နီများနှင့် portobello ဘာဂါများသာဖြစ်သည်။ ဘီယာ၊ ဝိုင်နှင့်အချိုရည်ကပြီးပြည့်စုံသည် ရိုးရှင်းစျေးပေါနှင့်ပေါများ menu ကို။
အားလုံးသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Madison Square Park တွင် hot dog လှည်းဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Times Square တွင်၎င်းလမ်း၏အနောက်တောင်ဘက်ထောင့်နှင့်လမ်း ၄၄ ခုရှိသည့်ရိပ်သာလမ်း ၆၉၁ လမ်းရှိစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည်။
ဘာဂါ၊ ဝိုင်၊ ဘီယာနှင့်ခွေးများကို ဆက်၍ အစေခံပါ တစ်ပတ်ကိုခုနစ်ရက်ဖွင့်ပါ နံနက် ၁၁ နာရီမှသန်းခေါင်အထိ။
က NYC အတွက်ပီဇာ? ဒါကထောင့်ကနေခွေးပြေးခွေးလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ညစာအတွက်ဟမ်ဘာဂါစားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီမှာ Don Antonio မှာစမ်းကြည့်ပါ ဦး နီပိုလစ်စတိုင်.
အဲဒီမှာ ပီဇာအမျိုးမျိုး ထို့အပြင်၎င်းတို့ပြုလုပ်ထားသောအိမ်လုပ် Mozzarella နှင့် Burrata သည်အိမ်လုပ်များဖြစ်ပြီးနယူးယောက်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျအသုပ်, croquettes နှင့်သိသာ, ခေါက်ဆွဲကိုစားနိုင်ပါတယ်.
Times Square ရှိအကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်အချို့မှာယခုအချိန်အထိဖြစ်သည် သူတို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှအစားအစာများကိုသင်စားနိုင်သကဲ့သို့၊ အမှန်တရားမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုစီ (ပီဇာ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ဆူရှီ၊ မက္ကဆီကန်၊ စပိန်၊ ရုရှားနှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့) ကြောင့်အဆုံးသတ်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာထိုင်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လမ်းပေါ်မှာစားချင်တာလား၊ နယူးယောက်ရှိဒီနယူးယောက်ရှိလှည်းများထဲမှအစားအစာများကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက်ဂန္ထဝင်ဖြစ်စေသည့်အရာပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ စားသောက်ဆိုင်တွေရှာနေတာငါကြိုက်တာတွေထဲကတွေထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးလို့ထင်တယ်။ သူတို့ကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » gastronomy » Times Square တွင်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ ငါနှစ်သစ်ကူးအတွက်မြို့တော်သို့ရောက်နေပြီး၊ ၁/၁/၁၃/၁၃ နေ့၊ 00:00 အချိန်တွင်ဘောလုံးကျသည်ကိုကြည့်ရှုရန်စားသောက်ဆိုင်၌ညစာစားလိုပါသည်။ Planet Hollywod ကိုပိတ်လိမ့်မည် ဘာအကြံပေးချင်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်